November 2019 – Swel Sone News
ဒီနေ့ညမှာ Myanmar Idol ကနေ လက်ပြနှုတ်ဆက်ပြီး အိမ်ပြန်ခဲ့ရပြီဖြစ်တဲ့ တန်ခွန်ကျော်
ပရိသတ်တွေ အံ့သြခဲ့ရတဲ့ Bottom3ထိုင်လိုက်ရသော အက်စတာ၊တန်ခွန်ကျော်နဲ့ အေးမြဖြူ Country Weekမှာ ဘရိတ်မပါတဲ့ကားသီချင်းနဲ့ သီဆိုယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့အက်စတာ၊ရန်ကုန်သားလေးတွေပါ သီချင်းနဲ့ သီဆိုယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ တန်ခွန်ကျော် နဲ့ တောက်ပခဲ့တဲ့နေ့ရက်များသီချင်းနဲ့ သီဆိုယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ အေးမြဖြူတို့ကတော့ ထင်မှတ်ထားဘဲ Bottom 3ထိုင်လိုက်ရပါတယ်။ ဒီကနေ့ညရဲ့ Result နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပရိသတ်ကြီးလည်း တအံ့တသြဖြစ်နေကြပါတယ်။ ဒီကနေ့ညမှာ နှုတ်ဆက် ထွက်ခွာသွားရတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်ကတော့ တန်ခွန်ကျော်ပဲဖြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အက်စတာနဲ့ အေးမြဖြူတို့က Save ဖြစ်ခဲ့ကြလို့ ဝမ်းသာပေမယ့် တန်ခွန်ကျော်အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးကလဲ တန်ခွန်ကျော်အတွက် အားပေးစကားလေးပြောပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။
ပရိသတ်တွေအံ့သြသွားရလောက်တောင် Bottom3မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ထိုင်လိုက်ရတဲ့ အေးမြဖြူ
ပရိသတ်တွေအံ့သြခဲ့ရလောက်တောင် Bottom3မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ထိုင်လိုက်ရတဲ့ အေးမြဖြူ
ပရိသတ်အမြင်ချင်ဆုံးဆယ်လီ စတီဒီယိုအတွင်းမှ ပရိသတ်များရဲ့ မဲနဲ့ ဆယ်လီစုံထောက်များရဲ့ရွေးချယ်မှုအရ ကျာ;ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ ကျားမျက်နှာဖုံးပိုင်ရှင်ကတော့ ပိုင်တံခွန် ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ဆင့်သို့ ဆက်လက်တင်ဆက်ခွင့်ရသွားသူတွေကတော့ Group A ရဲ့မျက်နှာဖုံးရှင်တွေဖြစ်တဲ့ နဂါးနဲ့ ဂြိုဟ်သား တို့ဖြစ်သွားပါတယ်။ နဂါးမျက်နှာဖုံးနောက်ဆယ်လီကို အေသင်၊ ပွင့်၊ စိုးမြတ်သူဇာ၊ နီနီခင်ဇော်လို့ ခန့်မှန်းခဲ့ကြပါတယ်။ကျားမျက်နှာဖုံးနောက်က ဆယ်လီကို ဦးအရိုင်းက နေတိုး၊ ခိုင်သင်းကြည်က မိုးယံဇွန်၊ ထွန်းထွန်းက ကျော်ကျော်ဗိုလ်၊ မိုင်လေးက ဇွဲပြည့်လို့ ခန့်မှန်းခဲ့ကြပါတယ်။ ဂြိဟ်သားမျက်နှာဖုံးရှင်ဆယ်လီကို ဦးအရိုင်းက ရဲလေး၊ ခိုင်သင်းကြည်က ခင်လှိုင်၊ ထွန်းထွန်းက စွမ်း၊ မိုင်လေးက နေထူးနိုင်လို့ အဖြေထုတ်ထားပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီး ထင်ထားတာနဲ့ တစ်ထပ်ကျသွားလားဆိုတာလည်း ဖြေပေးခဲ့ပါဦး… The Mask Singer Myanmar ပြိုင်ပွဲမှာ မတူညီတဲ့ အနုပညာရှင် (၁၈) ဦးပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ပြီး ပရိသတ်များနဲ့ ဆယ်လီစုံထောက်များက မျက်နှာဖုံးပြိုင်ပွဲဝင်ဆယ်လီများကိုဖော်ထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ The...
သားလေး ကိုကိုးကို တစ်နေ့တစ်မျိုး မရိုးရအောင် ဆင်နေတဲ့ မေမေပိုးအိအိခန့်
သရုပ်ဆောင် ပိုးအိအိခန့်ကတော့ သူမရဲ့ သားလေး ကိုကိုး ကို တစ်နေ့တစ်မျိုး မရိုးရအောင် ဆင်ပေး ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ပေးနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေရှာပါတယ်နော်။ သားလေးကိုကိုး ကလည်း အမေဆင်တဲ့အတိုင်းကို အိုက်တင်အပြည့်နေတတ်လွန်းသူလေးပါပဲ။ မနေ့ကပုံတွေမှာတော့ အဖေဖြစ်သူ မြန်မာ့လက်ရွေးစင်အောင်သူရဲ့ စတိုင်အတိုင်း ဘောလုံးမင်းသားလေး ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဒီနေ့မှာတော့ မေမေ ပိုးအိအိခန့်ခြေရာကို နင်းမယ့် သရုပ်ဆောင်ကောင်းကောင်းနဲ့ မင်းသားစတိုင်လေး တွေ့မြင်ကြရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုကိုးလေးဟာ အသက် ၄လပြည့်ခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့နာမည်ကိုတော့ သွင်ဦးဟန်ဆိုပြီး ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုကိုးလေးရဲ့ ချစ်စဖွယ်ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ဗီဒီယိုလေးတွေကို မေမေပိုးအိအိခန့်က မကြာခဏ တင်ပေးလေ့ရှိပြီး ပရိသတ်တွေကလည်း ကိုကိုးလေးကို အချစ်ပိုနေကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ ကဲ ဒီနေ့မှာရော မေမေပိုးအိအိခန့်တစ်ယောက် သားသားကို ဘယ်လိုတွေ ဆင်ထားလဲ၊ ဘယ်လိုစတိုင်တွေ အိုက်တင်တွေထုတ်ခိုင်းထားလဲဆိုတာ ပုံလေးတွေမှာ ကြည့်ကြည့်လိုက်ကြပါဦးနော်။ Credit : We Love...
မျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်လိုက်ရတဲ့ မိုးယုစံ
သရုပ်ဆောင်မိုးယုစံတစ်ယောက်ကတော့ မျက်လုံးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်လိုက်ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သူမက ကြောက်ပါတယ်ဆိုမှ ဖြစ်လာတော့လည်း လုပ်ရတာပဲ ဆိုပြီး မျက်လုံးခွဲစိတ်ထားတဲ့ပုံလေးကို တင်လိုက်တာပါ။ သူမကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေက စိုးရိမ်နေကြပြီး သူမကို ဘာဖြစ်တာလဲ၊ ဘာကြောင့်များ ခွဲစိတ်ရတာလဲဆိုပြီး မေးခွန်းတွေ မေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မိုးယုစံက သူမပရိသတ်တွေရဲ့ မေးခွန်းကို “မျက်ခမ်းစပ်နား အဖုဖြစ်တာ ပေါက်ပီးပီ အဖုက‌ပျောက်မသွားလို့ ခြစ်ထုတ်ရတာ” လို့ ပြန်လည်ဖြေဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ပြီးတော့ အဖုကြီးဖြစ်နေတာက ပေါက်တုန်းက ပြည်ထွက်တယ်၊ အဲဒီထဲက အဖုက သေးပဲသေးသွားတာ ကျန်သေးတာ eyeliner ဆွဲရင် ဒုက္ခရောက်တာလို့ လည်း ပြောထားပါသေးတယ်။ ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ မိုးယုရယ် မျက်လုံးမှာမှ ဖြစ်ရတယ်လို့ ဒီလိုအပူနာတွေက မကြာခဏဖြစ်တတ်ပေမယ့် ဖြစ်ပြီး မကြာခင် အဖုက ပျောက်သွားတတ်တာ ထုံးစံပါပဲ ။ အခုမိုးယုစံကတော့ အဲဒီအဖုက မပျောက်သွားတဲ့အတွက်ခြစ်ထုတ်ပစ်ရတာလို့ သိရပါတယ်။ မိုးယုစံတစ်ယောက်...
လူရွှင်တော်တစ်ယောက်ရဲ့ပြယုဂ်ဖြစ်တဲ့ ရယ်မောခြင်းမရှိတော့ပြီဖြစ်တဲ့ ဦးစိန်ရိုး
တစ်ခေတ်တစ်ခါက အောင်မြင်ကျော်ကြားလူကြိုက်များခဲ့တဲ့လူရွှင်တော်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ဦးမော့စ်၊ဦး မိုးဒီ၊ ဦးစိန်ရိုး၊ ဦးတိမ်ညွှန့်၊ ဦးဧရာ ၊ ဦးကင်းကောင်နဲ့ ဦးအရိုင်းတို့ကိုဆိုရင် မသိသူမရှိလောက်အောင် ရှေ့မှီနောက်မှီလူသိများခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ တချို့ကတော့ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ပေမယ့် တချို့ကတော့ အသက်အရွယ်အရ နာမကျန်းတဲ့အရွယ်ရောက်လာခဲ့ပြီဆိုရမှာပါ။ သူတို့ထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ လူရွှင်တော်ကြီးဦးစိန်ရိုးကတော့ အသက်(၈၅)နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး တော်တော်လေးမကျန်းမာတဲ့အနေအထားရောက်နေတယ်ဆိုရမှာပါ။ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာပြီဖြစ်တဲ့အပြင် မကျန်းမာတော့တာကြောင့် အရင်လိုတက်ကြွပျော်ရွှင်လန်းဆန်းမှုတွေလည်း ဦးစိန်ရိုးရဲ့မျက်နှာမှာမရှိတော့ပါဘူး။ ဦးစိန်ရိုးကြီးအရင်လို မရယ်နိုင်တော့ပါဘူး။ အသက်(၈၅)နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး ရာသီဥတုပူရင်နေလို့ကောင်းတယ်၊ အေးရင်မကောင်းဘူးဆိုပြီး သူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကောင်းရင် ရုပ်ရှင်၊ဗွီဒီယိုတွေ ရိုက်ချင်ပါသေးတယ်ဆိုပြီး အနုပညာအပေါ်ထားတဲ့သံယောဇဉ်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဦးစိန်ရိုးဟာ အရင်တုန်းကတော့ ရယ်ရယ်မောမောအပြင်ထွက်သွားလာခဲ့ပေမယ့် ဇနီးဖြစ်သူသေဆုံးခဲ့တဲ့အပြင် သိပ်မကြာခင်မှာပဲ သမီးဖြစ်သူဟာ ဆီးချိုရောဂါကြောင့် ခြေချောင်းသုံးချောင်းဖြတ်ခဲ့ရတာကြောင့် စိတ်ဓာတ်ကျသွားတာဖြစ်ပြီး သွားလာနေထိုင်မှုပုံစံတွေအကုန်ပြောင်းပြန်ဖြစ်ကုန်တယ်လို့ သားမက်ဖြစ်သူကဆိုပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ မှတ်ဉာဏ်ကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်တော့တဲ့အပြင် အပြင်သွားလာမှုနည်းသွားပြီး အိပ်ရာထဲပဲလှဲနေတဲ့ ယောက္ခဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်နေခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ဦးစိန်ရိုးဟာ အရယ်အပြုံးမရှိတော့ပေမယ့်...
ကျန်းမာရေး အခြေအနေပြန်လည်ဆိုးရွားလာတာကြောင့် ဆေးရုံထပ်တင်လိုက်ရတဲ့ ကစ်ကစ်
ဇာတ်ပို့ သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ကစ်ကစ်ကတော့ ဆီးချိုရောဂါကြောင့် ကျောက်ကပ်ပါပျက်စီးနေပြီး ရောဂါဝေဒနာကို အကြီးအကျယ်ခံစားနေရတာလည်း ပရိသတ်ကြီး သိရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ကျန်းမာရေးအခြေအနေမကောင်းတာကြောင့် အနုပညာအလုပ်တွေကို မလုပ်နိုင်ဘဲ ပရိသတ်တွေနဲ့ အဆက်အသွယ်ပြတ်နေခဲ့တာလည်း အတော်လေးကိုကြာနေပါပြီ။ကစ်ကစ်ဟာလက်ရှိမှာတော့ တစ်လတစ်ခါပုံမှန် ကျောက်ကပ်ဆေးနေရပြီး ဆေးကုသမှုခံနေရပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးချောလေးဖြစ်တဲ့ ခင်သဇင်ကတော့ ကစ်ကစ်အတွက်ကို လစဉ်အလှူငွေတွေလှူဒါန်းပေးနေပါသေးတယ်။သရုပ်ဆောင်ကစ်ကစ်ဟာ ရောဂါဝေဒနာကိုခံစားနေရပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့တာကြောင့် ရရှိလာတဲ့ ဆေးဖိုးအလှူငွေတွေနဲ့ရပ်တည်နေခဲ့ရပါတယ်။ရောဂါဝေဒနာတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကို ကြိုးစားအံတုနေရင်းနဲ့ကိုပဲ ကစ်ကစ်ကတော့ ဒီနေ့ မနက်မှာပဲ ဆေးရုံကို ပြန်လည်တင်လိုက်ရပြန်ပါတယ်။ ကစ်ကစ်တစ်ယောက် အခုလိုဆေးရုံတင်လိုက်ရတဲ့ အကြောင်းကို ခင်သဇင်က “မကစ် ဒီနေ့ ဆေးရုံ စတင်လိုက်ပါပြီ။ အခြေအနေကတော့ ပြောရခက်နေပါသေးတယ်” လို့ သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ ပရိသတ်တွေအတွက်အသိပေးဖော်ပြထားရင်း ကစ်ကစ်အတွက် တစ်လ တစ်လ ကျောက်ကပ်ဆေးတာ အပြင် ဆေးဖိုးတွေ နဲ့ တင် နေထိုင် စားသောက်ဖို့ မလောက်ငှ တော့တာကြောင့် ဆေးကုသစရိတ်အခက်အခဲအတွက်...
မင်္ဂလာသက်တမ်း ၃၄ နှစ်ပြည့်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ Rockerကြီး ဇော်ဝင်းထွဋ်တို့ ဇနီးမောင်နှံ
Rocker ကြီး ကိုညီထွဋ်လို့ လူသိများတဲ့ အဆိုတော်ဇော်ဝင်းထွဋ်တစ်ယောက်ကတော့ ဇနီးဖြစ်သူ မေခိုင်နဲ့ မင်္ဂလာသက်တမ်း ၃၄ နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီလို့ သိရပါတယ်။ ဇော်ဝင်းထွဋ်ရဲ့ သမီးကြီးဖြစ်သူ ဝင်းထွဋ်တာရာက သူမရဲ့ ဖေ့ဘုတ်မှာ ” လွန်ခဲ့တဲ့ ၃၄နှစ်တုန်းကတော့ တစ်လောကလုံးက သဘောမတူရင်တောင် မင်းကို ကိုယ်ရအောင်ယူမယ် …. ဘယ်သူမှလာမခွဲနဲ့ … မတားနဲ့ဆိုပြီး အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ ခိုးပြေးတဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦးဟာ… ခုလဲကျရော … မြေးဆီမှာ ဘိုးဘိုး … ဘွားဘွားကို နမ်းမယ်နော်ဆိုပြီး ခွင့်ပြုချက်ယူ အခြေအနေကြည့်နေရပါတယ်” လို့ ချစ်စဖွယ်ရေးသားထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝင်းထွဋ်တာရာဟာ သမီးလေးတစ်ဦးမွေးဖွားထားပြီး လက်ရှိမှာ Single Mom အဖြစ်နဲ့ သမီးလေးကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်။ သူမက ” Happy 34th Anniversary! ခုချိန်ထိ အားလုံးတူတူရှိနေနိုင်အောင်၊ နွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့ ချစ်နေကြနိုင်အောင် ကြိုးစားပေး၊...
အက်စတာကို အားပေးကြမ်းပြီး တင်ခဲ့တဲ့ စာသားတစ်ချို့ကြောင့် ပြန်တောင်းပန်လိုက်တဲ့ သက်မွန်မြင့်
လတ်တလော လူမှုကွန်ယက်မှာ ပရိသတ်တွေ စိတ်အဝင်စားဆုံး ဖြစ်နေတဲ့ Myanmar Idol Season4မှာတော့ ထူးခြားတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့အရည်အချင်းကြောင့် အားလုံးက အာရုံစိုက်ခြင်းကို ခံနေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Country Week မှာတော့ ပြိုင်ပွဲဝင် (၈) ဦးလုံးက တတ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံးကြိုးစား ပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာ တွေ့ရပြီး၊ အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကလည်း တစ်ယောက်ချင်းစီကို အင်တိုက်အားတိုက် အားပေးနေကြတာပါ။ မြန်မာအိုင်ဒေါကို အားပေးကြသူတွေထဲက အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ သက်မွန်မြင့်ကလည်း အက်စတာကို အားပေးတဲ့အကြောင်းကို လူမှုကွန်ယက်မှာ ထုတ်ပြောလာတာ တွေ့ရပါတယ်။ ကိုယ်သဘောကျတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်ကို အားပေးကြမ်းသွားတဲ့ သက်မွန်မြင့်ကတော့ သူမရဲ့အသုံးအနှုန်းတစ်ချို့ကြောင့် ပြန်လည်တောင်းပန်ခဲ့တာလည်း တွေ့ရပါတယ်နော်။ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် အက်စတာဒေါ့သ်ချင်းဆုန်ကို အားပေးတဲ့ ခံစားချက်တွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထုတ်ပြောလာတဲ့ သက်မွန်မြင့်ရဲ့အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ သက်မွန်မြင့်ကတော့ “လူမျိုးစွဲနဲ့ မတော်တဲ့သူ အရည်အချင်းမရှိတဲ့သူကို...